Barakacayaasha ku sugan nawaaxiga Muqdisho oo mudaaharaad dhigey maanta. [Akhris …] – Radio Daljir
Barakacayaasha ku sugan nawaaxiga Muqdisho oo mudaaharaad dhigey maanta. [Akhris …]
Luulyo 9, 2009 12:00 b 0
Muqdisho, July 09 – Dadka ku nool inta u dhaxeysa magaalada Muqdisho iyo Degmada Afgooye ayaa waxaa ay maanta muddaharaad ay ka dhigeen xaaladda ay ku suganyihiin dadkaas oo aan helin wax gurmad ah.
Dadka ku dhaqan deegaankaasi ayaa maanta waxaa ay dhigeen isu soo bax ballaadhan oo ay kaga cabanayeen in aan la soo gaarsiin wax gar gaar ah oo ay xilligan u baahanyihiin, iyaga oo sidoo kalena ka cabanayey falal ay ku kacdey mid ka mid ah hay?adaha deeqaha bixiya ee ku sugan Koonfurta dalka Soomaaliya.
Dadka barakacayaasha ah ayaa waxaa ay sidoo kale ay dalbadeen in lala soo gaaro gar-gaar deg deg ah, iyada oo si toos ah loogu keenayo gar gaarka iyo taakuleynta xilligan ay u baahanyihiin.
Dadka maanta isu soo baxay ayaa waxaa wajiyadooda ka muuqatey diif xooggan iyo dac darro haysata, waxaana labadii bilood ee ugu danbeeyey ay ku sugnaayeen xaalad adag oo dhinaca nolosha ah.
Hay?adaha deeqaha bixiya ayaa waxaa lagu eedeeyey in aysan gaarsiin dadka rayadka gar gaarka loogu talo galey in ay gaarsiiyaan, waxaana warbixinno ay soo saareen saxaafadda Caalamka lagu sheegey in suuqyada magaalada Muqdisho lagu iibiyo raashin gar gaar ah oo loogu talagaley dadka u baahan.
Waxaana xilligan dadka ku sugan gobollada dalka ee ka barakacay rabshadaha Muqdisho ay u baahanyihiin gar gaar deg deg ah oo loo soo gaarsiiyo xilligan iyada oo ay kordheyso dadka ka soo barakacaya dagaallada Muqdisho.